जीवनशैली Archives - Nepal Aawaaj
Moon Sampang Rai — May 4, 2021 add comment
काठमाडौ । क्यान्सर अस्पताल एण्ड रिसर्च सेन्टर ललितपुर तथा क्यान्सर सपोर्ट ग्रुपले क्यान्सर जितेकाहरुको मनोबल उच्च राख्ने र आफ्नो जिम्मेवारी तथा दायित्व बोध गर्दै जीवनलाई रमाईलो तरिकाले बाच्न सिकाउँने उदेश्यले समय समयमा...	Read more »
श्रिमान खाडीमा पसीना चुहाउदै श्रीमती भेटिइन झाडिमा (हेर्नुस् भिडियो)
Moon Sampang Rai — May 3, 2021 add comment
काम गर्नेले काम पाइरहेका छूनन् रकमाउनेले कमाउन पाइरहेका छैनन् । छोराछोरी र परिवार हेर्न निकै नै चिन्ता छ । यस्तो कोरोनाको दोस्रो लहर साम्य भएदेखि सबैलाइ सहज हुन्थ्यो । यो बेला संसारमा...	Read more »
डिस्चार्जपछि मदनकृष्णको सन्देश–‘कोरोना कहरका बेला सबैलाई माया गरौं
Moon Sampang Rai — May 1, 2021 add comment
काठमाडौ– कलाकार मदनकृष्ण श्रेष्ठ कोरोना संक्रमणलाई पराजित गर्दै मेडिसिटी अस्पतालबाट शुक्रबार साँझ डिस्चार्ज भएका छन् । कोरोना संक्रमण भएपछि उनलाई आठ दिन अघि अस्पताल भर्ना गरिएको थियो । डिस्चार्ज भएर घर आउनासाथ उनले...	Read more »
Moon Sampang Rai — April 27, 2021 add comment
बाजे, बाबु र आमाको नाम थाहा छैन । सडकमै बस्छु । सानैदेखि बनेपा बजारको सडकमा मागीखाने र सडकमै सुत्ने क्रममा प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । सँगै समातिएकी उनीसँग केही समय पहिला सडकमै...	Read more »
जुन धरहराबाट खसेर बाँ’चेकी थिइन् त्यही ठाउँमा रमिलालाई सरकारले दियो रोजगार !
Moon Sampang Rai — April 24, 2021 add comment
केही दिनदेखि धरहराका तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइसकेका छन् । भूकम्पले भ’त्केको ऐतिहासिक संरचनाको सफलतापूर्वक पुनर्निमाण गरेकोमा सरकारले जनताबाट धन्यवाद खाइरहेको छ । कसैले चाहिँ धरहरा बनाउने पैसाले यतिवटा अस्पताल बन्थे भनेर...	Read more »
यस्तो भए २०७२ सालको भूकम्पमा २२ घन्टा पुरिएका सोनिस !
निलो टिसर्ट र हाफ पाइन्ट लगाएका फुच्चे केटो दुगुर्दै कोठाभित्र पसे। उनको हातमा स्कुलको रिजल्ट थियो। पछिपछि उनकी आमा रश्मिला अवाल थिइन्। ‘खोइ, खोइ! रिजल्ट हेरौं त,’ हाम्रो आवाज सुनेर उनी एकछिन...	Read more »
दुर्घटनाका कारण भीम बोल्दैनन् तर पनि खुशी छिन् ज्ञानु
Moon Sampang Rai — April 22, 2021 add comment
९, बैशाख,०७८ -महेन्द्र राई दुर्घटनाका कारण भीम राई बोल्दैनन् तर पनि उनकी श्रीमती ज्ञानु राई खुशी छिन् । उदयपुर/ एक बर्षअघि आफैले चलाएको मोटरसाइकल दुर्घटनामा परी लामो उपचारपछि भीम राई बाँच्न त...	Read more »
Moon Sampang Rai — April 12, 2021 add comment
यथार्थ ! SLC मा 91.25% हानियो , +2 मा 78.23% हानियो। Bachelor मा 75 ओभर र masters मा राम्रै बढिरहेको थियो। कुन किताबको कुन पेजको कुन नम्बरमा कुन प्रस्न छ। त्यसको उत्तर...	Read more »
Moon Sampang Rai — April 10, 2021 add comment
नेपाल आवाज/ धेरै पैसा कामाउछु भनि विदेश गएकि रिता अहिले विदेश बाट फर्केर नेपाल मै केहि गर्छु भनि लागेकी छिन्। दाङ कि रिता श्रीमान को मोटरसाइकल दु’र्घट’ना मा परि नि’ध’न भए पछि...	Read more »
Moon Sampang Rai — April 9, 2021 add comment
वैदेशिक रोजगारीमा रहेका धेरै युवाहरुको घर उजाडीएको उदाहरण देखिएका छन् । युवकहरु खाडी मुलुकमा पसिना बगाएर काम गरिरहेका हुन्छन् । तर सन्तान लिएर गाउँमै बसेका श्रीमती भने पारिवारिक दवाव, सामाजिक अपहेलनाका कारण...	Read more »
अन्यपुरुषसंग सम्बन्ध रहेको आशंकामा विदेशवाट आएको एक सातामै २४ वर्षकी श्रीमतीको गरे हत्या (भिडियो हेर्नुस्)